डाक्टरको मनपरीले सिमा नाघ्यो, <br> बाँयाको हुनु पर्ने भयो दाँयाको
HomeHealth Education डाक्टरको मनपरीले सिमा नाघ्यो,
बाँयाको हुनु पर्ने भयो दाँयाको
डाक्टरको मनपरीले सिमा नाघ्यो,
aparadhkhabar.com 12:55 PM
काठमाडौं । राजधानीको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल धनाड्य ब्यक्तिहरु जाने अस्पतालको रुपमा चिनिन्छ ।
सर्वसाधरण नेपालीको पहुँच बाहिर रहेको अस्पतालमध्येको एक हो नर्भिक । सर्वसाधरणले उपचार गर्ने वीर, कान्ति बाल, टिचिङ, पाटन, सिभिललगायतका अस्पतालमा झण्डै आठ घण्टाको लाइन पछि मात्रै पालो आउने गर्छ । त्यसमा पनि वरिष्ठ डाक्टर भेट्ने सम्भावना भने निकै कम नै हुन्छन् ।
यसरी भुलबस अर्कै गोडाको अप्रेसन गर्ने डाक्टरहरुको टोलीले भुलबस आन्द्रा काट्नुपर्नेमा नसा काटे के हुन्छ ? त्यो कल्पना पनि गर्न सकिन्न । हुनतः डाक्टरलाई हामी सबै भगवानको रुपमा हेर्ने गर्छौं । कहिले कहिं जान्दा जान्दै र नचाहँदा नचाहँदै पनि गल्ती हुनसक्छ । तर, एउटा गोडाको अप्रेसन गर्नुपर्नेमा अर्को गोडाको गर्नु भनेको चाहिं सारै नै ठूलो गल्ती हो । अप्रेसन गर्ने भनेको जाँच पछिको अन्तिम प्रक्रिया हो ।
र पनि, सबै फाइल हेर्दा पनि देब्रे र दाहिने छुट्याउन नसक्नु, विरामीसँग कुन गोडामा गाह्रो भएको छ भनेर सोध्न नसक्नु डाक्टरको कतिसम्मको लापरबाहि हो ? के डाक्टहरुले चाहिं जे गर्दा पनि हुन्छ ?